Tababare Valverde oo shaaca ka qaaday sababta uu Lionel Messi ugu yeerin kulanka caawa ee Barcelona – Gool FM
(Barcelona) 10 Dis 2019. Tababaraha kooxda Barcelona ee Ernesto Valverde ayaa shaaca ka qaaday sababta uusan ugu yeerin Lionel Messi kulanka ay caawa ku booqan doonan kooxda Inter Milan garoonka Giuseppe Meazza.
Ernesto Valverde ayaa xusay in kooxda Barcelona ay soo bandhigtay ciyaar qaas ah sanadkii lasoo dhaafay ay la ciyaareen Nerazzurri, waliba la’aanta Lionel Messi.
Kooxda Barcelona ayaa caawa marti ugu noqon doonto naadiga reer Talyaani ee Inter Milan garoonka Giuseppe Meazza iyagoo horey u xaqiijiyay inay u soo baxeen wareega 16-ka ee Champions League, halka Inter ay dooneyso inay guuleysato si ay u jarato tikitkeeda wareega xiga ee tartankan.
Ernesto Valverde ayaa shir jaraa’id uu ka soo muuqday maanta kahor kulanka caawa ay wada ciyaari doonaan kooxaha Inter Milan iyo Barcelona wuxuu u sheegay warbaahinta:
“Sida iska caadiga ah dhamaadka toddobaad kasta marka aan ku dhawaaqo liiska ciyaartoy aan u yeeray, waa inaan sharraxaa sababta aan uga doortay ciyaaryahan midka kale”.
“Dhanka Jordi Alba, way fududahay maxaa yeelay wuu dhaawacmay, sidoo kale Nélson Semedo, laakiin Lionel Messi waa inuu kulankan helaa xoogaa nasiino ah”.
“Waxaan halkan nimid kaddib dhowr ciyaarood muhiim ah ee aad u adag, waxaan runtii ku guuleysanay inaan u gudubno wareega xiga ee tartankan, sidaas darteed waxaan go’aansaday inuu jiro ciyaaryahan aan qasab aheyn inuu qeyb ka noqdo safarkeena”, kaasoo uu kala jeedo Lionel Messi.
“Laakiin waxaa jira xulashooyin kale, taasina waa muhiim, ciyaartoyda waxay ciyaari doonaan kulan weyn sida sanadkii hore, waxaan la ciyaarnay Inter kulan weyn Messi la’aantiis”.